Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii deegaanka Galgala ee gobolka Bari – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaaladii deegaanka Galgala ee gobolka Bari
Warar faahfaahsan ayaa ka soo baxaya dagaalo khasaare dhimasho & dhaawac dhaliyey oo saaka waaberigii ka qarxey deegaanka Galgalka ee gobolka Bari, halkaasi oo ay ku dagaalameen ciidamada Puntland & maleeshiyo hubaysan oo taabacsan wadaadka Sheekh Atam.
Dagaalkan oo daba jooga dagaaladii horey uga dhacay deegaanka Galgala ee buuraleyda ah ayaa warar kala duwan ka soo baxayaan gaar ahaan gacan ku haynta deegaankaasi, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in deegaanka Galgala ay la wareegeen xoogaga taabacsan Sheekh Atam, inkastoo aan si buuxda loo xaqiijin karin warkan.
Dadka deegaanka oo aan xiriir la sameynay ayaa sheegaya in maleeshiyaadka hubaysan ee taabacsan Sheekh Atam ay saaka waaberigii ay weerar gaadmo ah ku soo qaadeen ciidamada Puntland ee ku sugan deegaankaasi, iyadoo la soo sheegayo dagaal mudo socdey uu dhexmarey labada dhinac.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen dagaalkan kuwaasi oo ka tirsan dhinacyada dagaalku dhexmarey, laakiin tirada dhaawaca wali ma aynan helin.
Ma jiro wax war ah ka soo baxay masuuliyiinta Puntland oo ku aadan dagaalkan culus ee ka dhacay deegaanka Galgala ee gobolka Bari.
Dhinaca kale wakaalada wararka AP ayaa goor dhaw shaacisay war ay ku sheegayso inay ka soo xigatey sarkaal Soomaali ah oo aanay sheegin magaciisa in uu u xaqiijin in dagaalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.
Wakaalada wararka AP waxay kaloo sheegtey in masuulka oo codsadey inaan magaciisa la xusin sababo ah inaan loo ogeyn in uu saxaafada la hadlo uu u xaqiijiyey in weerarkaasi ay ku dhinteen 9 ka mid ah ciidamada Puntland & 6 ka mid ah maleeshiyaadka.
Istuudiyaha SBC ee magaalada London oo xiriiro kala duwan la sameeyey dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in si rasmi ah ay gacanta ugu galeen deegaano ka tirsan Galgala maleeshiyaad daacad u ah Sheekh Aatam.
Deegaanka Galgala wuxuu dhacaa Koonfur Galbeed ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari waxaana uu u jiraa 40 KM.
Warar dheeraad ah kala soco SBC Online.
SBC News Desk-London